HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulGreat Opportunity E-Bike Baaskiilka Warshadaha dalka Turkiga
05 / 12 / 2019 34 Istanbul, GUUD, WADADA, Nidaamyada Tire Wheels, Gobolka Marmara, TURKEY
fursado weyn in baaskiil in turkey warshadaha baaskiilka
Turkey ayaa wajahaya fursad weyn in industry baaskiilka: e-Baaskiilada. Baahida loo qabo elektaroonigga, ayaa sidoo kale loo yaqaan “baaskiil ku caawiya baaskiil adaha adduunka, si dhakhso leh ayuu u korayaa. Turkey sababta e-Baaskiilada waxaa mid ka mid ah alaab-qeybiyeyaasha ugu weyn ee dalalka Yurub noqday? Shirka Wershadaha Baaskiilka ee Waqtiga-Dhaweyd (BISED) Kulan Wadajir ah, waxyaabihii la qaban lahaa si loo gaaro himilooyinkan ayaa laga wada hadlay waxaana la go'aamiyay howlaha mudnaanta leh.
Waxaa dajiyay Prof.Dr. Dr. Kulanki Emre Alkin uu la yeeshay Madaxweynaha BİSED iyo Gudoomiyaha Arzu Bisiklet Esat Emniyet, Maareeyaha Guud ee Baaskiilka Hell Anıl Şakrak, Gudoomiyaha CYCLEUROPE Önder Şenkol, xubin ka tirsan Golaha Salcano Bayram Akgül, BİSAN kuxigeenka guud ee agaasime Ümit Onur Yüksel, Shimano Bicycle A .Şti. Shuraako iyo Maareeyaha Guud Metin Cengiz, Shimano Bisiklet A.Ş Maamulaha IEM OEM Faruk Cengiz, Accell Bicycle kuxigeenka Maareeyaha Guud Selim Ataz, Managermit Kontroolka Bisiklet ee Büşra Hande Doğanay, Kron Bisiklet A.Ş. Xiriiriyaha guud Burak Staircase, Suuqgeynta Baaskiilka Asli Baaskiilka Master Servet Emniyet, gudoomiyaha firfircoon ee Güler Kenan Güler iyo gudoomiyaha wakhtiga Turkiga Filiz Özkan ayaa ka soo qayb galay kulanka.
“Fursad Weyn Fursad
Midowga Yurub gudahood xuduudaha jawaabeyaasha tilmaamaysa in lagu qiyaasay inuu yahay qiyaastii 10-12 million suuqa e-baaskiil, sannad xnumx'l in ogaaney tiradaasi kor u qaadi doonta inay 2030 million unugyada Turkey ee e-baaskiil waxay carabka ku noqon lahaa mid ka mid ah alaab-qeybiyeyaasha weyn ee dalalka Yurub.
Ilaa Janaayo 2019, Shiinaha wuxuu lahaa saamiga ugu badan suuqa Yurub. Laakiin 18 Bishii Janaayo 2019, Komishanka Yurub wuxuu ku dhawaaqay in canshuuro baaskiil wadista gawaarida korantada ah laga soo rogay Shiinaha. In kasta oo heerka canshuurta ka-hortagga daadashada uu ku kala duwan yahay sida ay u shaqeeyaan shirkadaha, boqolleyda 33,4, oo guud ahaan la dabaqi karo, ayaa gabi ahaanba hakisay iibinta baaskiillada korantada ku shaqeeya ee Shiinaha ka socda ee Midowga Yurub.
Sida laga soo xigtay shaqada Ururka Warshadaha Baaskiilka Yurub (EBMA), 2019 milyan oo e-baasto ah ayaa laga dhoofin doonaa Shiinaha oo loo dhoofin doonaa EU-da 1 haddii codsigan ka hortagga daad-guraynta uusan bilaaban. Mar kale, sidu muujiyay baadhitaan by ebma ah, inactivation ee suuqa ee Shiinaha ayaa ka mid ah dalalka ay ka faa'iideysan doonaan ugu xaaladda this u timid inaad Turkey.
E-Bike heshiis TURKEY xaqiijin doonaa qabashada xuduudaha 10
Qeybta hoose ee qeybta baaskiilka lama sameynin. Laakiin baaskiilka ma aha qaybta cusub ee Turkey. Waxaa jira shirkado sameeynayay tan sanadaha 50. Si kastaba ha noqotee, ma jiraan alaab-qeybiyeyaal gudaha ah. Sidaa darteed, waaxdu ma laha dabacsanaan ku filan. Tani waxay sidoo kale quseysaa basaska elektaroonigga ah. Tallaabooyinka abuuritaanka warshadaha-hoosaadka waa in la qaataa sida ugu dhaqsaha badan uguna macquulsan.
Waxaa jira baahi loo qabo koox burooyinka elektarooniga ah si loo xalliyo arrinta warshadaha. Xaqiijinta in kooxdu ay sida ugu dhaqsaha badan wax u tareyso xiriirka bulshada, hoos u dhigidda kharashyada, waxsoosaarka, tartanka iyo Kheyraadka aadanaha. Kooxda (kutlada) noocan oo kale ah waxay sidoo kale si togan u saamaysaa dhiirigelinta dowladda. Waxaa lagama maarmaan ah in si dhakhso leh wax looga qabto si loo qiimeeyo daaqadda fursadda ee ku taal bogga elektaroonigga ah. soo horjeeda Turkiga in ay dhacdo Poland, Bulgaria, Portugal, talaabooyinka la qaaday durba Hungary.
Bateriga iyo Mootada
Qeybaha ugu muhiimsan ee elektaroonigga waa batteriga iyo mashiinka. Warshadaha waa inay diirada saaraan soo saarista baytariyada iyo matoorrada korantada ee sameeya boqolkiiba 90 ee 70-80 halkii ay ka ahaan lahaayeen qaybo qiimo jaban oo ku saabsan baaskiillada e-baaskiil. Ama ugu yaraan mid ka mid ah labadan alaabta soo saaray in Turkey ee qaybta meel aad u faa'iido keentaa.
Shaybaarka La Aqoonsaday
Shuruuda kale ee muhiimka ah waa sameynta shaybaar la aqoonsan yahay oo loo adeego dhammaan waaxda. Waxaa jira baahi weyn oo loo qabo xarun tijaabo oo ay ku jirto ISO 9000, shahaadada sheybaarka iyo aqoonsi la xiriira. Shaybaar la aqoonsan yahay oo iskiis u dhisan ayaa laga dhex abuuri karaa BISED. Tijaabadani waa in loo qaataa nooc kasta kahor intaadan dhoofin. nidaamka baaritaanka ma aha sida dheer iyo shaybaarka qaali dalka Turkiga waa in ka badan intii caadiga ahayd. Tani waxay si xun u saamaysaa tartanka qaybta.
maal-gashadayaasha ajnabiga waxaa soo socda dalka Turkiga waa in la hubiyaa. Tan darteed, soojeedinta qiime waa in loo bandhigaa maalgashadayaasha shisheeye ee imaan kara. Si loo soo jiito raasamaal shisheeye, waxaa sidoo kale faa'iido leh in la kordhiyo sumcadda "Made in Turkey" aragtida Yurub ee soosaarka baaskiilka.
Kabista dowladda ayaa muhiim u ah xalinta dhibaatooyinka asaasiga ah ee waaxda. Gaar ahaan, taageerada aasaasidda shaybaarka baaritaanka waa muhiim. Gobolku wuxuu xilligan siinayaa taageeradan buundooyinka. Waa maxay sababta warshadaha baaskiilku uga faa'iidaysan waayaan taageerayadan markay soosaarayaan qandaraas? Taageerada iibsashada baaskiillada waa in sidoo kale la tixgeliyaa. Yurub gudaheeda waxaa hada ka jira warshadaha baaskiil wadista sedex wadan. Dalka Iswiidan, tusaale ahaan, iibsashada baaskiillada elektiroonigga ah waxaa lagu bixiyaa taageero dib-u-celin lacageed illaa 1.000 Euros. Awstaraaliya waxaa sidoo kale jira taageerada dowladda 300-500 Euro ee xamuulka xamuulka iyo baaskiillada e-xamuulka ah.
Mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu muhiimsan waaxda baaskiilku waa la'aanta ilaha aadanaha. Injineerada iyo farsamayaqaannada labaduba waxay leeyihiin hoos u dhac weyn oo xagga bina-aadamka ah. Waaxdu waa inay bilawdaa inay ka shaqeyso sidii kor loogu qaadi lahaa kheyraadkeeda aadanaha.
Weli waxaa jira iibiyayaal horay lacag u siiyay ama kuwo hooseeya oo qaybta iibiya. Tani waa mid ka mid ah dhibaatooyinka dhismaha. Soosaarka jaranjarada ayaa noqon kara dhibaato muhiim u ah soosaarayaasha gudaha ee ganacsiga shisheeye. Waxaa jira baahi weyn oo loo qabo kormeerka gobolka.
Wadashaqayn lala yeesho Gawaarida
Wadashaqayn adag oo lala yeesho waaxda baabuurta, gaar ahaan R&D, waa la abuuri karaa. Waxaa la ogyahay in shirkadaha gawaarida ay u furan yihiin meelaha maalgashi ee ka duwan. Maalgashiga ay u baahan yihiin waaxda baaskiilka, oo u baahan qaab dhismeed adag iyo maalgelin, waxaa lagu gaari karaa iyadoo lala kaashanayo shirkadaha baabuurta.
Midowga Yurub waa in uu ka soo Turkey, si degdeg ah, dabacsan qaadan baaskiil caawisay korontada, iyo inay tartamaan. Tani waxay u baahan tahay heerar tayo leh. Baaskiilku kaliya ma yiraahdo, 'Waxaan qaatay baaskiil waxaanan ku rakibay matoor iyo batari.' Waa lagama maarmaan in la tixgeliyo arrimaha sida shahaadada gaariga la soo saaray iyo cimriga nolosha ee baytariyada.
fursado cusub oo ku jirta gacanta line tareenka Turkey Turkey-Iran
Heshiiska Ciyaaraha ee Model Model DACIA Model (Sawir Sawir)
Iiraaniyiin oo u safraya Novruz Fursad ay ku yimaadeen Palandöken
20 bilyan oo doolarka 'tareenka' ee ganacsiyada maxaliga ah (War-Saxaafadeed)
Imamoglu, Basaska Dadweynaha 'Monopolization ma siin doono fursad'
Baaskiilada Baaskiilada Furitaanka 300 Baaskiilayaasha La helay
TÜVASAŞ ahaa mid ka mid ah Turkiga ee ugu weyn Industrial Enterprises 500
Heshiiska u dhaxaysa Turkey, Masar, Great
Ururka Wershadaha Baaskiilka
baaskiil koronto caawiyay
Turkey Baaskiilka Industry